Cristiano Ronaldo muxuu ka aaminsanyahay Mustaqbalka Wiilkiisa? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cristiano Ronaldo muxuu ka aaminsanyahay Mustaqbalka Wiilkiisa?
(18-9-2018) Cayaaryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday in Wiilkiisa yar ee Cristiano Jr uu isaga ka fiicnaan doono isla Markaana uu gaari doono heerka ugu Sareeya ee kubada Cagta.
ristiano Ronaldo oo Waraysi siiyey Wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegay in wiilkiisa Cristiano Jr uu yahay mid leh xirfad aad u heer saraysa isla Markaana uu rajeynayo in uu isaga kaga wanaagsan doono dhanka Kubada Cagta sida uu hadalka u dhigay.
Cristiano Jr oo dhashay Sanadkii 2010 isla Markaana aan ilaa hada lashaacin Hooyada dhashay ayaa u dheela kooxda ka hooseysa 9 ka Sano ee Juventus Naadigaas oo uu durba laqabsaday una dhaliyey Goolal aad uga badan kuwa Aabihii u dhaliyey Juventusta waa weyn.
Sidoo kale Ronaldo ayaa sheegay in wiilkiisu Noqon doono Cayaaryahanka ugu fiican Caalamka oo dhan mudo aan dheereyn isla Markaana uu buuxin doono booskiisa xulka qaranka Portugal.